Ibhodi yeNgcebiso yezoNyango - Global ARCH
Global ARCH / Ngathi / Ibhodi yeNgcebiso yezoNyango
UKathy Jenkins, MD, MPH
UKathy ngugqirha wentliziyo kwisibhedlele sabantwana saseBoston, eBoston, MA. UkwanguMlawuli weSigqeba weZiko loHlalutyo lweMigangatho yoMgangatho waBantwana (CAPQA) kunye neNkxaso yoLawulo lweQela lobuNkokheli leCAPQA.
UDisty Pearson-uLonxibelelwano lweBhodi kunye noSekela Sihlalo
UDisty Pearson ungumncedisi kagqirha kwiBoston Adult Congenital Heart Service (BACH). Ulilungu elisekayo le-Adult Congenital Heart Association (ACHA) yeBhodi yeNgcebiso yezoNyango kunye noSihlalo weQela eliSebenzayo lezeMpilo leHlabathi loMbutho weHlabathi weZifo zeNtliziyo yeZitho zengqondo (ISCHD), ekhuthaza ukhathalelo lwe-ACHD kwihlabathi liphela. Kwakhona, uDisty ngumzali wesigulana se-CHD.
UChristopher Hugo Hamman, MD
UGqirha Hugo-Hamman ngugqirha wezifo zentliziyo eKapa, ​​eMzantsi Afrika, kunye neGosa eliyiNtloko kwiNzululwazi yeNhliziyo yaBantwana yaseNamibia.
U-Babar S. Hasan, MD
UBabar ngugqirha wentliziyo yabantwana oqeqeshelwe kwiSibhedlele saBantwana saseBoston, kwaye ngoku unguNjingalwazi oDibeneyo kwiSebe leZigulo zabantwana kunye neMpilo yaBantwana kwiYunivesithi yaseAga Khan (AKU) ePakistan. UkwayiNtloko, umgca weNkonzo yeZibhedlele zaBantwana kwiSibhedlele se-AKU. Iindawo zakhe ezinomdla ziziphumo ezisemgangathweni kwi-LMIC yezigulane zesifo senhliziyo ezizalwa kunye nokusetyenziswa kohlalutyo oluchanekileyo kwi-LMIC.
U-RK nguNjingalwazi weKlinikhi kunye neNtloko ye-Cardiology yabantwana e-Amrita Institute of Medical Science kunye neZiko loPhando e-Cochin, e-India.
ISivakumar Sivalingam, MD
USivakumar ngugqirha wotyando lwabantwana kwiZiko leNtliziyo leSizwe eKuala Lumpur, eMalaysia.
I-Liesl Zühlke, i-MBChB, i-DCH, i-FCPaeds, iKhadi leZitifiketi, i-MPH, i-FESC, i-FACC, i-PhD
U-Liesl wasebenza njengomququzeleli weklinikhi wenkqubo ye-ASAP, elawula iiprojekthi ezininzi ze-RHD eMzantsi Afrika nakwilizwekazi lase-Afrika. Ungumdibaniselwano neZiko leMetri yezeMpilo, kwaye ungumbhali-mbhali kwiincwadi ezininzi zoMthwalo weSifo seLizwe. Uthatha inxaxheba kwiiprojekthi zophando ezithatha i-CHD kunye ne-RHD, i-HIV kulutsha, kunye nesifo sentliziyo kubafazi abakwiminyaka yokuzala. Ufumene inkxaso-mali kwiiprojekthi eziphambili zophando e-Afrika, ngentsebenziswano entsha kwilizwe liphela. Kutshanje, wawongwa ngembasa ye-MRC / Dfid ye-African Leadership Award.